कहिले हुन्छ सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा ? « Pen Nepal
कहिले हुन्छ सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा ?
Published On : 31 October, 2020 6:59 am By : पेननेपाल
काठमाडौँ । सरकारले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइको घोषणा छिट्टै नै गर्ने भएको छ । सगरमाथाको उचाइ मापनको काम सम्पन्न भई घोषणाको तयारी भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।